UTV ATV Cable Sunga
Zvekukurukurirana Midziyo H
DAC Tambo vs AOC Tambo
ne admin pane 21-07-24
DAC Tambo uye AOC Tambo anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzedhata dzepamusoro-performance komputa network cabling system nekuda kwavo kwakaderera latency, simba rakaderera uye mutengo wakaderera. Direct Attach Cable (DAC) ine twinax tambo tambo, tambo dzeDAC dzinogona kuiswa muzvikamu zviviri: pasiti DAC & a ...
Dhizaini isina mvura yemota yakaoma uye yakanyorova nzvimbo uye wiring sunga
ne admin pane 21-01-09
Iyo mota yakaderera-voltage wiring sunga inobatanidza izvo zvemagetsi zvikamu zvemota yese, inoita basa rekuparadzira simba uye kufambisa chiratidzo, uye ndiyo hunyanzvi system yemota. Kuti uve nechokwadi chekugadzikana kweiyo wiring harness system, iyo ini ...
Olink Kutora Chikamu Mune Iyo Exhibition
Chinese Yekunze Mutero Wakawedzerwa Paiyo US Chekutanga Zvibatanidza
Sekureva kwenhengo yeCommission Tariff Commission yeChitubu cheState Council chiziviso chazvino paAug 8th, runyorwa rwezvinhu zvemitero yeUS zvichagadziriswa. Nhau dzakaipa ndedzekuti chinobatanidza chichava chekutanga chinhu chigadzirwa kuisa 25% mutero. Ichi zvakare chigadzirwa chekutanga mu ele ...
bhokisi retsamba monica@olinktek.com
Wiring Sunga Vagadziri
Wiring Sunga nokutengesa